Sex Knowledges – MM Online Shopping
Category: Sex Knowledges
About Sex Knowledges
Sex Toy class (2)
2019-09-13 Cherry Mask0 comment
What are sex toys and how should i use
Sex toy Class (Introduction ) part 1
2019-09-07 2019-09-07 Cherry Mask0 comment
Feedback And Review Sex Knowledges
2019-05-13 Cherry Mask0 comment
လောကကြီးမှာ အတက်ရှိသလို့ အကျလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ စကားက အရမ်းမှန်ပါတယ် ပုံမှန်လေးရောင်းရလို့ အနေအထားက တည်ငြိမ်နေပြီးဆိုပြီး ၀မ်းသာလို့မဆုံးသေး . 12.5.19 နှင့် 13.5.19 ( ဒီနေ့) Live မှာ ကြည့်တဲ့လူက နည်းလာပြန်ကော ကြည့်တဲ့လူနည်းတာနဲ့ ရောင်းအားက သိသိသာသာကျတယ် .. မနေ့က လွှင့်တဲ့ live ရဲ့ order ကို ဒီနေ့ပို့ရတာ .. ဒီနေ့ live က အခြေအနေ မကောင်းတော့ မနက်ဖြန်လည်း ဘယ်လို့နေမလဲမသိ … ပြဿနာက မိတ်ဆွေတွေ့က share ပေးပေမယ် ကြည့်တဲ့လူမတက်လာတာပါ ဘာလို့လဲဆိုတော့ share ပေးတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ့ကို တချို group တွေ့က report ထုတားလို့တဲ့ ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲလေ.. ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေ့က ရှက်စရာ ပစ္စည်းတွေ့ဆိုတော့ .. ဒီတော့ စဉ်းစားကြည့်လိုက်တာ sex group တွေ့, sex messager တွေ့ကိုတော့share ပေးရင်တော့ သူတို့လက်ခံမယ်ထင်ပါတယ်… ဒါကြောင့် MM ကို ကူညီ share ပေးသော မိတ်ဆွေများခင်ဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီး sexual နဲ့ပတ်သက်သော group တွေ့ကို ဦးစားပေး share ပေးပါခင်ဗျာ… Live အတွင်းမှာ ဒီထက်ပိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ promotion…
Monthly Promotion Sex Knowledges
ဒီနေ့ MMရဲ့ လက်မောင်းတဖက်ပြုတ်သောနေ့.
2019-03-31 Cherry Mask0 comment
MM စတင်တည်ထောင်တဲ့ ကာလအတွင်း နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း ကျွန်တော်တို့နဲ့ ဒိုးတူပေါင်းဖက် ရုန်းကန်ပေးတဲ့ …. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တဦး သူရဲ့ တချို့သော ကိစ္စကြောင့် MM ကနေနုတ်ထွက်သွားတဲ့နေ့လေးပါ .. MM ဒီနေ့ ဒီအခြေအနေအထိေ၇ာက်လာတာ သူရဲ့ကြိုးစားမူကြောင့်ပါ .. သူကြောင့်သာ မဟုတ်ရင် MM က ဒီလောက်ထိ ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီလေး .. ဒီ၂နှစ်ကျော်အချိန်အတောအတွင်းမှာ အတူသွား ၊အတူစား .. (အတူတော့မအိပ်ခဲ့ပါဘူး စတာနော် .. ) ၀န်ထမ်းတယောက်ဆိုတာထက်စာရင် ညီအကိုပမာ ကူညီပေးခဲ့တာတွေ့ ၊အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်အားထက်သန်စွာ ကြိုးစားလုပ်ပေးတာတွေ့ customer complain တက်တိုင်း ကျွန်တော်တို့က ပြန်ဆူရင် ငြိမ်ခံနေပေးသူ ၊ တာဝန်ယူတာထက် တာဝန်သိသောသူ ည ၁၀နာရီလောက် ပစ္စည်းလာယူတဲ့ cu ရောက်လာရင်တောင် တချက်မှာ မငြင်းပဲ ပစ္စည်းထပို့ပေးသူ လုပ်ငန်းအပေါ်သစ္စာရှိပေးသော ညီလေး …. အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ .. ဘ၀တလျှောက်လည်း အောင်မြင်ပါစေ.. လို့MM ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ….. မိတ်ဆွေတို့ကော အခုလို့မျိုး လက်ရုံးတဖက် ပြုတ်ထွက်ခဲ့ဖူးပါသလား…..
အမျိုးသားအများစုဟာ လိင်တန်အရွယ်အစားကြီးမားဖို့အတွက် ပြောင်းကို အသုံးပြုကြတာများပါတယ် ပြောင်းအသုံးပြုခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ လိင်တန်ကိုကြီးစေရှည်စေပါတယ် ။ ထောင်မတ်မူအားကောင်းစေပါတယ်. … တချိုအသက်ကြီးသမားများအတွက် လိင်တန်ပိုင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြန်ကောင်းစေတယ် ပန်းလာစေပါတယ် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ့ကတော့ လိင်တန်ရှိသွေးကြောမျှင်လေးတွေ့ကိုပေါက်ကွဲစေပါတယ် ထိုသို့ပေါက်ကွဲစေခြင်းဖြင့် အနာတရဖြစ်စေပြီး အလွန်အကျွံဖြစ်ပါက လိင်အင်္ဂါပုံပျက်နိုင်ပါတယ် လိင်တန်ကို လေးလံသောအရာဖြင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ဆွဲထားခြင်းဖြင့် အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းကို တဖြည်းဖြည်း ရှည်စေသော နည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမယ် တခါတလေကျတော့ ဒီနည်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ထောင်မတ်မူအားလျှော့ကျစေခြင်းနှင့် လိင်စိတ်ကိုလျှော့နည်းစေပါတယ် ထိုအရာသည် လုံးပတ်တောမထွက်စေပါ ဒါပေမယ် ရှည်စေပါတယ် Extender များ ရှည်အောင်တပ်သော ကိရိယာများကိုတပ်ဆင်ခြင်း လိင်တန်ကို ကိရိယာဖြင့် ကြာရှည်အောင်တပ်ထားရခြင်းဖြင့်ပါတယ်ထိုသို့တပ်ဆင်ခြင်းသည် အရွှတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲပါတယ် ထိုကြောင့်အချိန်အကြာကြီးမတပ်ဆင်ပါနဲ့ အထက်ပါအချက်အလက်များသည်အင်တာနက်မှာ ကောက်နုတ်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် လိုအပ်ချက်ရှိပါက ဖြည့်စွက်ပေးကြပါ အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင် ဘယ်ပစ္စည်းမဆို အလွန်အကျူးသုံးစွဲခြင်းသည် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ် သတ်မတ်ထားသော အချိန်အတိုင်းတာဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေ့ကျင့်ပေးပါ
ဗိုင်ဗရေတာ အသုံးပြုရာတွင် သိသင့်သော ဆောင်ရန်နှင့်ရှောင်ရန်အချက်များ
2019-03-16 Cherry Mask0 comment
ဆောင်ရန် .. ၁ ဗိုင်ဗရေတာအသုံးပြုတိုင်း ရေဓာတ်ကို အခြေခံသော ချောဆီကို အသုံးပြုပါ ၂ အသုံးပြုပြီးတိုင်း သေချာစွာ ဆေးကြောပါ ၃ ။ အသုံးမပြုမီမှာလည်း vibrator ကိုအရင်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါ ၄။ ဗိုင်ဗရေတာကို မိမိရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းနဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး အနေအထားအမျိုးမျိုးဖြင့် စမ်းသပ်အသုံးပြုနိုင်တယ် ရှောင်ရန် အနှိပ်ဆီ၊ အဆီဓာတ်ကို အခြေခံပြုလုပ်သော ချောဆီ၊ ဆီလီကွန်ကိုအခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားသော ချောဆီဖြင့် အသုံးမပြုပါနှင့် အားပြည့်ပြီးမှာသာ အသုံးပြုပါ ။ အကယ်၍ အားသွင်းကြိုနှင့် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရသော ပစ္စည်းဖြစ်ပါက အားသွင်းကြိုး ခေါင်းကို ရေမစိုစေရန် အထူးသတိပြုပါ ဆောင်ရန် .. ဆေးကြောရာတွင် ဆပ်ပြာအပျော့စားနှင့် ရေနွေးကိုအသုံးပြုပါ ရှောင်ရန် Antibacterial ဆပ်ပြာအသုံးမပြုပါနဲ့ ဒါက သင့်ဗိုင်ဗရေတာကို အကျိုးသက်ရောက်မှာမဟုတ်ပါ ဒါပေမယ် အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်တွင်ရှိသော သဘာဝအလျှောက် ထုတ်လွှတ်ပေးသော ကောင်းသော ပိုးမွှားများကို သေစေမှာစိုးလို့ပါ ထည်ပြုတ်ခြင်း သို့ ပန်းကန်ဆေးစက်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်း မပြုလုပ်ရ အပူအလွန်အမင်းပေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းအတွင်းတွင်ရှိသော မော်တာကို ပျက်စီးစေမှာစိုးလို့ပါ Microwave နဲ့ထည်ပေါင်းခြင်းမပြုလုပ်ရ အရက်၊ အက်ဆီတုန်းဓာတ်ငွေ့၊ ဓာတ်ဆီ ၊ acidic /alkaline (အယ်လကာလီသတ္တိလွန်ကဲသော သန့်စင်ရည်များဖြင့်လည်း မဆေးကြောရ ထိန်းသိမ်းထားရှိပုံ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော နေရာတွင်တာ…
အကယ်၍များ sex ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်တတ်တဲ့ ပြဿနာတွေ့ sex toys နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ့ကို MM ကနေ ၂ပတ် ၁ခါလောက် live လွင့်ပြီး ဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်မျိုးရှိရင် ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ ………………….
2019-03-01 Cherry Mask0 comment
လိင်တံညီဖွားကို စတီးချောင်းလို မာတောင့်တင်းဖို့ ညီကိုတို့ ရွေးချယ် စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာများ
2019-01-17 Cherry Mask0 comment
‪#‎ကော်ဖီ ကော်ဖီမှာပါတဲ့ ကဖင်းဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ် ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုကောင်းစေပြီး၊ လိင်တံသို့ သွေးပို့လွှတ်မှု့ကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ ကော်ဖီစစ်စစ် ဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ ‪#‎ခရု ‪#‎ယောက်သွား ကျားအားတိုးဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ testosterone အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော zinc နဲ့ vitamin B6 တို့ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် ကာမအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ ‪#‎ငရုပ်သီး ငရုပ်သီးပူပူစပ်စပ် စားတဲ့အခါ သင့်မျက်နှာ နီရဲလာပါသလား။ ထိုသို့ နီရဲလာခြင်းဟာ ငရုပ်သီးက သွေးကြောလေးတွေကို ကျယ်လာစေလို့ပါ။ မျက်နှာမှာရှိတဲ့ သွေးကြောပဲလားဆိုတော့ မကပါဘူး။ လိင်တံမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေကိုပါ ကျယ်စေတာကြောင့် သင့်ငယ်ပါကို အားပြည့်စေမှာပါ။ ‪#‎ငှက်ပျောသီး မာတောင့်တင်းတဲ့ လိင်တံပိုင်ရှင်တွေဟာ ကျန်းမာတဲ့ နှလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပါတယ်။ ထို့ကြောင့် potassium ဓာတ်ကြွယ်ဝပြီး နှလုံးကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ ငှက်ပြောသီးကို စားသုံးသင့်ပါတယ်။ ‪#‎Omega3 သွေးလှည့်ပတ်မှု့အားကောင်းစေတဲ့ Omega3 က သင့်ကာမအင်အားကို ထောက်ပံ့ပေးမှာပါ။ Omega3 ဓာတ်ဟာ ဆယ်မွန်၊ တူနာငါးတွေမှာ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ငါးကြီးဆီလို့ အလွယ်ခေါ်တဲ့ Omega3 ဆေးတောင့်တွေလည်းရှိပါတယ်။ ‪#‎ဝက်သား ဝက်သားမှာပါတဲ့ vitamin B1က အာရုံကြောတွေကိုအားကောင်းစေတာကြောင့် သင့်လိင်တံကို သန်မာလာအောင် အထောက်အကူပြုပါတယ်။ ‪#‎ဇီးသီး ‪#‎မက်မန်းသီး ဇီးသီး၊ မက်မန်းသီးတို့မှာပါတဲ့ anthocyanins က သွေးကြောနံရံ တွေမှာ အဆီတွေလာကပ်ပြီး သွေးကြောကျဉ်း မသွားအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ‪#‎ကြက်သွန်…
အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ
2019-01-06 2019-01-06 Cherry Mask0 comment
အကယ်၍ သင်သည် အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံနေလျှင် သင့်တွင် အိပ်ပျော်စဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြဿနာ (sexsomnia) ရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးမှ ဤရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ သိသင့်သည်များကို ဖော်ပြပါမည်။ လူအတော်များများသည် အိပ်နေရင်း လမ်းလျှောက်ခြင်းကို ရင်းနှီးကြပါသည်။ သို့သော် အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း (sexsomnia) ဖြစ်လျှင် အများစုသည် အံ့သြသွားကြသည်။ အိပ်နေရင်း လမ်းလျှောက်ခြင်းလိုပင် sexsomnia သည် အိပ်နေစဉ်တွင် လိင်ဆက်ဆံသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဤအကြောင်း သဘာဝ sexsomnia ကို တွေ့ကြုံရသူများက မှားယွင်းစွာ နားလည် ကုသမိကြပါသည်။ အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း (sexsomnia) ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ။ အိပ်နေရင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် NREM (အိပ်တ၀က်နိုးတ၀က်အခြေအနေ) ပုံစံမျိုးဖြစ်ကာ လူများကိုလိင်ဆက်ဆံသည့်အပြုအမူဖြစ်သည့် ပွတ်သပ်ခြင်း၊ လိင်အင်္ဂါကိုလက်နှင့်နှိုးဆွကာ ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် တစ်ခါတစ်ရံမုဒိမ်းကျင့်ခြင်း စသည်တို့ကိုအိပ်ပျော်နေစဉ် ပြုလုပ်မိစေပါသည်။ အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိသည့် လူတစ်ယောက်သည် လုံးဝနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်နေလျှင် ရှေ့ရက်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့သည်ကို မှတ်မိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ အများဆုံးတွေ့ရသည်မှာ လူတစ်ဦးသည်တွေ့ကြုံခဲ့သော အဖြစ်အပျက်ကို သတိမရနိုင်(သို့) ငြင်းဆိုနေမည်ဖြစ်သည်။ ဘာတွေကအိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း ကိုဖြစ်စေသလဲ။ အိပ်ပျော်နေစဉ် လိင်ဆက်ဆံခြင်း အပါအ၀င်အိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာအများအပြားသည် အိပ်ရေးပျက်ခြင်း (သို့ ) အိပ်နေစဉ် ရုတ်တရက် အသက်ရှူခြင်းကဲ့သို့ သော အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။ ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ဤအပြုအမူများကိုသိသိသာသာ လျော့ချပေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင်မျိုးရိုးလိုက်ခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။…